Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Ụgbọ elu eletrik na bumblebees enweghị ike ife efe
Aviation • Njem azụmahịa • News • Tourism • Transportation • Akụkọ dị iche iche
Ụgbọ elu eletriki - dị ka bumblebees?
Ruo ọtụtụ iri afọ, ndị ọkà mmụta sayensị gosipụtara na bumblebees enweghị ike ife efe na iwe were ha nke ukwuu na ha gara n'ihu na -efe efe - na -eji nha dị iche iche. Otu ihe ahụ na-eme n'ụgbọ elu eletriki-batrị. Ha kwesiri ịbụ ihe agaghị ekwe omume, mana ihe karịrị otu narị nọ ebe ahụ na ihe ruru 1000 n'usoro.
Ndị a pere mpe nke na ha adịghịdị mkpa ụkpụrụ ọhụrụ nke ife efe.
Ha na -eji ụgbọ ala agbada ụzọ Tesla.
N'ime akụkọ nke IDTechEx, “Aircraft Electric Aircraft: Smart City na Regional 2021-2041,” ụgbọ elu eletriki eletriki a na-agbakwụnye yana nyocha nke mgbago mgbago ọkụ eletrik ọhụrụ na ọdịda ụgbọ elu ka akọwapụtara.
Ọtụtụ ndị obere mmezi na -amụba. Ndozi abụọ 10% na -erite uru site na 21% na nhọrọ nkwalite dị ukwuu. Ndị mmadụ na -eche n'ụzọ na -ezighi ezi na Tesla na -enweta oke ndekọ site na batrị ka mma, mana ọ dịkwa mkpa na -eme ka batrị dị nso na njedebe ya n'enweghị nsogbu, na -ewepụ ọtụtụ puku akụkụ na nkọwa ndị ọzọ. Oke ụgbọ elu na -achọsi ike karịa n'ihi na nso nso bụ ihe nchekwa, yabụ ndị ọkwọ ụgbọ elu na -achọkwa 0.2 ihe na -adọkpụ, na -ewepụ otu kilomita nke eriri, ọtụtụ narị akụkụ, na igwe anaghị arụ ọrụ nke ọma na ọkụ eletrik.
N'ịbụ ndị chere eziokwu ihu, ndị na -ahụ maka obere ụgbọ elu eletrik na -atụgharị uche ha ugbu a ka nke ka ukwuu ụgbọ elu eletrik na iwepụ kwụ ọtọ enweghị ike. Ha nwere isi ihe ụfọdụ, n'ihi na anyị nọ ugbu a n'oge nzuzu ebe ọtụtụ atụmatụ na-adịghị mma na-adọta ịsa ego site n'aka ndị na-etinye ego mechiri anya na-atụ anya Tesla na-esote. Ndị ọkà mmụta sayensị ziri ezi ịkọwapụta na otu ihe eji eme mkpọtụ na nku nku nke ọ bụla na ọ nweghị ihe dị n'etiti ga-atụpụ onwe ya na mbara igwe mgbe otu dara. Ha ziri ezi ịdọ aka na ntị na site na akụkụ ndị dị ugbu a, ọtụtụ VTOL multirotor na -ada site na mbara igwe n'ime nkeji iri isii site na ịpụ - enweghị mwepụ na ọbụghị mbughari parachute n'ogo ahụ. A na-ajụ ajụjụ gbasara akụnụba tagzi obodo na akụkọ a, "Taxisị ụgbọ elu: Mwepụ ụgbọ elu kwụ ọtọ na ọdịda ụgbọ elu 60-2021."
Ọtụtụ na -eji nku nku anya agbagoro na VTOL, ka ha nwee ike na -efe efe dị ka ụgbọ elu oge niile, na -atachi obi ogologo oge, na, n'ọnọdụ ụfọdụ, na -amịpụ na mberede. Otu ihe atụ bụ mmalite UK Vertical Aerospace na-ese n'elu ijeri $ 2.2 na-eso Virgin Atlantic na American ụgbọ elu na-etinye iwu maka 1,000 nke VTOL nke nwere nku-ọtụtụ ijeri dollar n'agbanyeghị na ọ nweghị ihe dị na ikuku.
Ndị helikopta dị iche na -arụ ọrụ nke ọma na ụgbọ elu kwụ ọtọ mana na -enweghị ihe mgbochi na nkwụsi ike na ikuku. Ha na-enye aka iwu ụlọ ndị dị elu, na-efegharị otu awa n'otu oge. Enweghị batrị VTOL nwere ike ime nke ahụ: ha ga -eleba anya n'okwu azụmaahịa obere hover.
Laghachi na mbuli elu na mbata ụgbọ elu nwere nku, enwere mgbakwụnye yiri bumblebee na-adọ aka na ntị na ọ nweghị nke ụdị atụmatụ oche 8- ruo 100 nke ekwere na nkwa maka 2026-2030 nwere ike ife efe. Ha na -eji nhatanha na -ezighi ezi n'ihi na 2 na -eji ụkpụrụ dị iche iche nke mmetụta ala na ọtụtụ ndị ọzọ na -eji ụkpụrụ ọhụrụ nke nkesa DT kesara, gụnyere ọtụtụ ndị na -ebugharị ya n'akụkụ nku. DT pụtara iji flaps na oke ibu, oghere, ọnụ ahịa ihe, ịdọrọ, na ogologo runway. Ngụgụ na nnwale NASA na DLR na -akwado nke a. United Airlines na -eme atụmatụ ịmalite ụgbọ elu eletrik site n'afọ 2026.
Ndị naysayers dịkwa njọ n'ihi na ha na -eleghara ụzọ “obere enyemaka ọ bụla” maka ụgbọ elu buru ibu. Dịka ọmụmaatụ, ụgbọ elu mpaghara mpaghara na-emetọ ikuku nwere kilomita 30 nke eriri ọkụ na ihe na-adọkpụ adịghị mma mana nke a mụrụ ọkụ eletrik dị ka Tesla. Ogologo Tesla na -abịa nke ukwuu site na braking na -emegharị ya na nha nke ụgbọ elu ahụ bụ ndị na -ebugharị ya na -agbada na nrịgo na wiil na -amaliteghachi na ọdịda. N'ezie, wiil ndị nwere ike nwere ike ime tagzi ụgbọ elu eletriki na ịpụga ya nke ọma.
Ka anyị tụlee otu ihe atụ. Bye Aerospace nwere ihe karịrị iwu 720- ihe karịrị nde $ 250, na ebubata ihe ga-amalite- site n'ụlọ akwụkwọ na-efe efe na ndị na-ahụ maka tagzi ikuku maka ụgbọ elu batrị 2 na 4 nwere ike ịnwale ofufe taa. Ọ mara ọkwa na nso nso a ụgbọ elu eletriki 8 na-ebu ụgbọ elu na ụdị “ọnụ ala-nke onye nwe ya kacha dị ala”, mana ekwuputara ọkwa 500 nm (dabere) dabere na mmekorita ya na Oxis Energy maka batrị ọhụrụ. Ndị naysayers na -achị ọchị mgbe Oxis malitere ime n'afọ. Agbanyeghị, nnukwu LGChem nọ na oge yiri ya iji nye batrị yiri ya na, dị ka Tesla, Bye anaghị atụkwasị obi n'otu batrị. Ha na -arụ ọrụ grunt na obere ndozi niile. Akụkụ ndị a nke nkọwapụta na -ekpughere ụfọdụ nke a yana ọtụtụ atụmatụ nchekwa karịrị ogologo ogologo mgbagharị ya, sistemụ akpaaka mberede na parachute ụgbọ elu.
Nhazi eFlyer 800 a bụ ihe ọhụrụ kpamkpam site n'ọnụ ruo ọdụ. Aerodynamic arụmọrụ dị okpukpu abụọ nke ụdị ụgbọ elu turboprop nke ihe nha nke ukwuu-arụmọrụ sistemụ mkpali dị elu yana arụmọrụ moto dị elu na ịdọrọ ala jụrụ oyi, igwe eletriki eletriki nwere nku abụọ nwere nke ọ bụla nwere windo abụọ na-enweghị ike na ngwugwu quad-redundant. A na-enye mmụba dị ntakịrị site na ike anyanwụ ike ike (ikekwe ọkwa satịlaịtị ha nwalere-ọ na-emepụta ọkụ eletrik okpukpu abụọ nke ụgbọ ala na ụgbọ elu nke anyanwụ taa) na tagzi eletriki n'ime.
Jet It, na JetClub, ụlọ ọrụ nwanne nwanyị nwere obere ihe na North America na Europe, bịanyere aka na nkwekọrịta ịzụta ọtụtụ ijeri dollar maka ụgbọ elu eFlyer 800. Na mgbakwunye, L3Harris Teknụzụ na Bye Aerospace abịanyela aka na nkwekọrịta iji mepụta ụdị ọkụ eletrik niile, nke ga-enye ikike ọgụgụ isi, onyunyo, na nyocha (ISR).
Ka ọ dị ugbu a, Bye Aerospace anaghị eji ụgbụ elu efe efe na -eme bumblebee, mana ọ nwere ike tinye mkpali kesara n'oge ọ họọrọ. Ka ọ dị ugbu a, ụgbọ elu ọkụ eletrik niile na-agbago ngwa ngwa karịa ndị na-ebugharị ihe na-ebugharị dị ka Teslas na-eme ngwa ngwa. Naanị kpachara anya maka ịsị na ọ nweghị azụmahịa ọkụ eletrik-ma ọ bụ ụgbọ elu mpaghara nwere ike ife efe. Enwere bumblebee na -amụmụ ọnụ ọchị site n'elu.